Toriteny Alahady 14 Febroary 2010 : Ny tenin'Andriamanitra no tondro-zotra ho amin'ny fahavelomana – FJKM Ambavahadimitafo Toriteny Alahady 14 Febroary 2010 : Ny tenin'Andriamanitra no tondro-zotra ho amin'ny fahavelomana |
Toriteny Alahady 14 Febroary 2010 : Ny tenin'Andriamanitra no tondro-zotra ho amin'ny fahavelomana
Ry havana, miarahaba antsika rehetra tafahaona indray amin’izao andro izao ary afaka mandre tokoa ny hafatry ny Tompo izay manan-kambara amintsika mandrakariva, dia ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fiadanany anie hanafaka ao am-pontsika mandrakariva araka izany. Ity misy tantara kely anankiray hanombohantsika izao toriteny izao.
Teny am-pandehanana ity fiara anankiray niditra sampanan-dàlana, nisy làlana nifanapaka maromaro, tsisy marim-pamantarana anefa teo amin’io toerana io, dia nandroso ny fiara ary nizotra namonjy ny làlana izay tiany aleha, kanjo tamin’izay fotoana iray izay indrindra nisy fiara anankiray hafa nirimorimo, inona no nitranga hoy ianao ? Rehefa misy lozam-pifamoivoizana ohatra izany dia hoy ny ao an-tsain’ny rehetra hoe « velona daholo ve ? sa nisy maty ? » Fa ny zanak’Andriamanitra rehetra no mpampiasa ny làlana izay miaraka amin’Andriamanitra sy mankany amin’Andriamanitra.
Ny tenin’Andriamanitra no tondro-zotra ho amin’ny fahavelomana
Andeha àry ny bokin’i Ohabolana izay iray amin’ireo boky mirakitra ny fahendrena no raisintsika angalàna hafatra ka ho sainintsika ao anatin’izany ny hoe « Ny tenin’Andriamanitra no tondro-zotra ho amin’ny fahavelomana ». Ho an’iza àry izany tondro-zotra izany ? Ho an’izay mitandrina Azy, andeha ange hojerentsika ao amin’ny andininy faha 20 amin’i Ohabolana toko faha 4 novakiantsika teo :
« Anaka, tandremo ny teniko ! » ;
Ny hoe « anaka » ry havana dia manambara ny maha-lehibe, ny maha-manam-pahefàna na ray aman-dreny ilay miteny ; ny manam-pahefàna moa na ny lehibe rehefa miteny ny eo ambany fifehezany na ny zanany izany ka miteny hoe « Tandremo ! » dia tena mikasa tsara izy izay sady miaro azy amin’ny loza mety hiseho.
Fa ny dikan’ny hoe « Tandremo ! » dia sady fampirisihana no didy amin’izay hampitandremana azy ary asaina tanterahin’ilay hampitandremana.
Ny tanjona amin’ny fitandremana moa dia tsy hafa fa fiarovana ihany, ka ny filazàn’ny bokin’ny Ohabolana ato hoe : « teniko » amin’ity andininy ity kosa dia manondro ilay lahateny na teny maromaro mirakitra fahamarinana na fahendrena. Koa raha fehezintsika izany hoe « Anaka tandremo ny teniko ! » sady sainintsika hoe tombo-zotra ho amin’ny fahavelomana ny Tenin’Andriamanitra ho an’izay mitandrina Azy dia mikendry indrindra ny fiarovana ny zanak’Andriamanitra izany. Didina ny zanak’Andriamanitra mba hisaintsaina ny tenin’Andriamanitra, hamantatra ny tenin’Andriamanitra, hampiasa ary hanaraka izany tenin’Andriamanitra izany.
Ny zanak’Andriamanitra antsoin’izao Soratra Masina izao hoe « Anaka » eto dia manondro ary manambara antsika rehetra, manomboka hatramin’ny ankizy kely rehetra izay vita batisa tamin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ka hatramin’isika olon-dehibe, eny ny fotsy volo aza dia isika Fiangonana rehetra izany.
Raha mitandrina ny didiko hianareo dia hitoetra amin’ny fitiavako tahaka ny nitandremako ny didin’ny Raiko sy ny hitoerako amin’ny fitiavana
Raha mijery ny ao amin’ny tantaran’ny Filazantsara novakiana tamintsika teo araka ny Lioka dia izao : mpahay lalàna anankiray maniry ny ho velona ka mba ho mpandova fiainana mandrakizay no nasain’i Jesoa nitadidy indray ny voasoratra ao amin’ny lalàna, novakiantsika teo izany araka ny andininy faha 25-27 ao amin’io Lioka 10 io, ny voasoratra ao amin’ny lalàna io dia ny didin’Andriamanitra na ny tenin’Andriamanitra izay nandidiana an’i Mosesy mba ho ambara amin’ny zanak’Israely hotandremany, ary ho saintsaininy mandrakariva araka ny bokin’i Deotornomia sy ny Levitikosy izay hitantsika moa tao anaty fonon-teny tamin’ny vakiteny teo, fa na dia i Jesoa Kristy io aza izay tonga teto an-tany ka niara-nonina tamintsika dia mba nitandrina koa izany didin’Andriamanitra izany, ary hoy indrindra Izy ao amin’i Jaona 15, 10 hoe « Raha mitandrina ny didiko hianareo dia hitoetra amin’ny fitiavako tahaka ny nitandremako ny didin’ny Raiko sy ny hitoerako amin’ny fitiavana ». Jesoa Kristy nankato ny toetra tao amin’Andriamanitra, nankato ny didin’Andriamanitra.
Isika kristianina koa ry havana dia te ho velona marina amin’izany fahavelomana mandrakizay; izany ny hirarian’ny Soratra Masina antsika mba hitandrina ny tenin’Andriamanitra, ho antsika rehetra koa izany.
Ry hava-malala ao amin’ny Tompo, amin’izao làlana izoran’ny fiainantsika izao, aza variana amin’ny hakiviana, na ny fahasarotana, tsy hoe hiha-mora akory ny fiainana na handeha ho azy fa mamporisika anao kosa ny teny soratra masina mba hampiasa ny tombo-zotra ho amin’ny fahavelomana ka hanaraka izany araka ny tenin’i Jesoa tao amin’io Lioka 10, 28 io ihany hoe : « Ataovy izany dia ho velona ianao », ny asan’ny tondro-zotra mantsy dia mamporisika ny mpampiasa ny làlana mba hampirindra ihany koa ny fifamoivoizana amin’izany làlana izany !
Tondro-zotra ho amin’ny fahavelomana ny tenin’Andriamanitra ho an’izay mitandrina azy :
Mahita izany firindràna izany ve ianao eo amin’ny fiainana misy anao ? Ny Soratra Masina no aoka ho raisinao mba ho tondro-zotra ho amin’izany làlana tsara maha-kristianina antsika izany. Alahadin’ny Baiboly anio ry havana, dia manentana anao mba hampiasa izany Baiboly izany fa efa 175 taona ary efa mahery aza no nanànantsika ny Baiboly amin’ny fitenintsika, dia anjarantsika rehetra ihany koa no mampiasa izany Baiboly izany mba hanondroana amintsika ny fiainana mankany amin’Andriamanitra, mba hahavelona antsika amin’ny finoana ary hanarahantsika ny sitrapon’Andriamanitra.
Raha Alahadin’ny Baiboly tokoa anio dia manentana antsika mba hanohana ihany koa ny asan’ny Mampiely Baiboly Malagasy amin’izay azontsika atao rehetra, iombonantsika ho mpanondro zotran’ny hafa ihany koa ho ao amin’ny làlan’ny fahavelomany, fa ny Baiboly no fitaovam-pamantaran-dàlana ho antsika te ho velona mandrakizay, ary rehefa mamaky azy ianao dia angataho ny Fanahy Masina mba ho fantatrao tokoa izay tiany ambara ary izay ihany no maha-tenin’Andriamanitra ity Soratra Masina am-pelan-tànantsika ity.
Fa ny tondro-zotra raha tsy arahina na tsy ampiarina dia very ny hasina ananany, koa ny faharoa, tondro-zotra ho amin’ny fahavelomana ny tenin’Andriamanitra ho an’izay mampiatra azy. Teo izany isika mahita hoe tondro-zotra ho an’ny fahavelomana ny tenin’Andriamanitra ho an’izay mitandrina azy, fa amin’izao kosa dia hoe « ho an’izay mampiatra azy ».
Ny andininy faha 27 indray no ho jerentsika ao anatin’izany araka ny Ohabolana 4 ihany « Aza mivily na ho amin’ny ankavànana na ho amin’ny ankavia, esory amin’ny ratsy ny tongotrao ».
Ny teny hoe « aza » dia haintsika rehetra fa maneho hevitra fandraràna izany ary rehefa mandrara toy izany dia mitohy ny didy na ny fampitandremana izay omena ilay olona raràna. Fa ny atao hoe « fahadisoana » kosa ry havana na ny hoe « fahotana » araka ny fahendrena Jiosy dia ny fialàna amin’ny làlana mahitsy ka iviliviliana, izany hoe izay manota na ny olona rehetra manota dia miala amin’ny làlana mahitsy nosoritan’Andriamanitra azy.
Ahoana àry no ahafantarana hoe niala tamin’izay nosoritan’Andriamanitra ny olona ?
Ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra ihany, izay ihany no ahafantarantsika hoe mbola ao anatin’ny làlana nosoritan’Andriamanitra isika. Efa tondron’ny Soratra Masina aminao ny tokony atao, tondro-zotra ny tenin’Andriamanitra, ary izany no ilazany hoe « Aza mivily na ho amin’ny ankavanana na ho amin’ny ankavia, esory amin’ny ratsy ny tongotrao, araho ny làlana mahitsy, mandehàna amin’ny marina, fa ny tongotra no atao ijoroana, rehefa mitsangana ny olona anankiray« .
Raha atao izany ny dikan-tenin’izany tenin’ny soratra masina izany dia hoe « Mijoroa eo amin’ny fahamarinana ianao », indrindra ange ry havana ny ambaran’ny Soratra Masina ao amin’ny bokin’i Mika 6, 8: » Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain’i Jehovah aminao dia izao ihany: ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po ary ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena« .
Dia ho antsika rehetra tsy an-kanavaka ihany koa anie izany tenin’Andriamanitra izany. Fa voasoratra izany tenin’ny soratra masina izany ho an’ny zanak’Israely mba hanarahany marina an’Andriamanitra ka hialàny amin’ny faharatsiana, fa mba hitodiany kosa amin’Ilay Andriamanitra Mpiaro azy. Moa va tsy ho antsika zanak’Andriamanitra miandry sy manantena tokoa ny fiarovan’Andriamanitra izany? Fa na dia Jesoa Kristy arahantsika io aza ange ry havana dia mba nampihatra ny sitrapon’Andriamanitra sady nanantanteraka izany ihany koa araka ny filazantsara nosoratan’i Jaona 5 manao hoe: » Fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapon’izay nanirak’ahy« , dia mbola misy ihany koa ao amin’i Matio » Fa aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanantanteraka« .
Andeha isika hamaky sy hampihatra ny Baiboly:
Ry havana malala ao amin’ny Tompo, aoka ho fenointsika ny fanantanterahantsika ny sitrapon’Andriamanitra, aza atao tapatapany, mba hanànantsika ihany ny Baiboly nefa tsy vakiana, mba mahay mamaky ihany isika nefa tsy mampihatra, mba mandamina ihany isika nefa tsy mihaino. Izao tokoa mantsy no mahalasa ny saina, rehefa milaza ny mpitsabo fa ity ny fanafody ilaina ahavelona na ahasitrana, iza moa isika no tsy hiazakazaka na hividy izany fanafody izany, saingy raha tsy hoanina ny fanafody dia mazava loatra fa hijanona ho amin’ny faharariana ihany ny marary na ho faty mihitsy àry, kanefa io fanafody io tsy hoanina fahatany fa arahana kosa izay toro-marika na toro-làlana omen’ny mpitsabo amin’ny fihinànana azy.
Ry havana malala ao amin’i Tompo, ny hetsiky ny FJKM andiany faharoa dia manoro antsika ny fomba hamakiana Baiboly, ka aza avela ijanona ho fahalalàna fotsiny izany raha te ho velon’ny finoana marina isika fa handeha mba hampihatra, handeha mba hanao, handeha mba hamaky dia mba hahazo aina sy hahazo hery isika amin’izany famakiana ny tenin’Andriamanitra izany. Ny tondro-làlana ihany koa mantsy dia natao isafidianana izay aleha, natao hanarahantsika izay tokony atao, tsy misy ifanerena izany fa safidintsika mazava tsara.